Mpiasam-panjakana matoatoa : Asaina mamerina ny vola noraisiny hatramin’izay -
AccueilSongandinaMpiasam-panjakana matoatoa : Asaina mamerina ny vola noraisiny hatramin’izay
Mpiasam-panjakana matoatoa : Asaina mamerina ny vola noraisiny hatramin’izay
Tsy mijanona fa mitohy hatrany ireo fanenjehana ireo mpiasam-panjakana matoatoa. Ireo izay efa tra-tehaka, dia terena handoa ny vola noraisiny nandritry ny naha “fantôme” azy. Misy no asaina mamerina 5 hatramin’ny 10 taona, arakaraka ny naha “fantôme” azy. Mandra-piandry izay anefa dia hogiazana avokoa ny fananan’ireo mpiasam-panjakana matoatoa ireo hanonerany ireo vola noraisiny hatramin’izay. Fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana manoloana ireo mpiasa matoatoa izany.
Fa mialohan’izay, dia hosivanina amin’ny alalan’ny “virement bancaire” izy ireo, ka ho mora fantarina sy ho hita eo ireo tena mpambotry firenena ireo, izay mandany ny volam-bahoaka. Tsara marihina fa efa betsaka ireo paikady entin’ny fitondram-panjakana hanafoanana azy ireo. “ Tafiditra amin’izany izao, ny tetikasa Prea eo anivon’ny minisiteran’ny Asam-panjakana, izay iarahana miasa amin’ny vondrona Eraopeana sy ny minisiteran’ny Fitantanam-bola ka haharitra 6 taona. Nisy moa ny fitaovana nomen’ny vondrona Eraopeana tamin’izany, mba hanatsarana ny asam-panjakana, ka anisan’izany ny ady amin’ny fanafoanana ireo mpiasam-panjakana; izay tsy maintsy hofoanana”, araka ny fanambaran’ny minisitra Maharante Jean De Dieu, nandritry ny fotoana fifampiarahabana tratry ny taona notanterahin’ity minisitera ity teny amin’ny Espace iray teny By Pass. Nandritra ity fotoana ity moa no nanolorana mari-boninahitra “Grand Officier de l’Ordre National” ny minisitra Maharante Jean De Dieu.
Nambaran’ny minisitra ihany koa fa efa tonga ilay masinina natao hanamboarana diploma tokana, hialana amin’ny fampiasana diploma hosoka.
Tafatsangana omaly ny governemantan’ny marimaritra iraisana tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian, araka ny didim-panjakana lah.2018-540 manendry ireo mpikambana. Araka izany, nampahafantarina omaly ihany ireo mpikambana eo anivon’ity governemantan’ny marimaritra iraisana ity, izay miisa 30. Amin’ny maha ...Tohiny